XAQIIJIN: Premier League Oo Baadhitaan Ku Bilaabay Manchester United & – Axadle
Premier League oo kaashanaya xidhiidhka kubadda cagta FA ayaa baadhitaan ku bilaabay kooxda kubadda cagta Manchester United, kaddib qalalaasihii shalay ka dhashay garoonka Outdated Trafford ee sababta u noqday in ay baaqato ciyaartii Manchester United iyo Liverpool.
Sida uu xaqiijiyey wargeyska Day by day Mail, P;remier League iyo xidhiidhka FA ayaa bilaabaya baadhitaan la xidhiidha wixii dhacay, waxaana miiska saaran tallaabooyin ciqaab ah oo Manchester United la marsiin doono.
Taageereyaasha ayaa ka mudaharaadayey go’aankii ay kooxdu kaga mid noqotay tartanka fashilmay ee Tremendous League, kaas oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen Manchester Metropolis, Liverpool, Chelsea, Arsenal iyo Tottenham.
Wargeyska Day by day Mail waxa uu sheegay, in haddii Manchester United lagu helo, in ay sabab dhinaceeda ka timid ku kaceen taageereyaashu, kaddibna ay ciyaartii Liverpool ay ku martigelin lahaayeen u baaqatay sababtaas darteed, in kooxdu waajihi doonto ciqaab adag.
Xidhiidhka FA ayaa guddi baadhitaan u saaraya dhacdooyinkii Outdated Trafford iyo bannaankiisa ee shalay, waxaanay guddidaasi warbixinta kusoo celin doonaan maamulka oo ugu dambaynta gaadhi doona go’aan ciqaabeed.
Wargeyska Day by day Mail waxa uu intaa ku daray, in Manchester United ay u badan in laga jaro dhibco laakiin ma caddaynin in ay yihiin saddexdii dhibcood ee ciyaartan oo ay suurtogal tahay in lagu wareejiyo Liverpool iyadoo ciyaartana sidaa lagu kansalayo.
The Worst Sorts of Drinks for Your Coronary heart Well being, Science Says